Dhalinyarro muhaajiriin ah oo ku hor banaanbaxayey baarlamaanka oo la weeraray | Somaliska
Dhalinyarro muhaajiriin ah oo ku hor banaanbaxayey baarlamaanka oo la weeraray
Boqolaal ruux oo dhallaanka kali socod ah, islamarkaasina mudaharaad baryahan ka waday barxadda loo yaqaano Mynttorget ee baarlamaanka dalkaan loo maro, ayaa kooxo u geeeysteen weerar. Booliiska oo goobta gaaray ayaa sheegay dibad baxayaashaasi keli socodka ahi la bartilmaameedsaday.
“Waxaa nalugu wargeliyey in dad ku mudaharaadayey barxadda Mynttorget ay kooxi weerar u geysateen kuwaas oo saddex ka mid dadkii banaan baxayey uu ka soo gaaray dhaawacyo fudud” Sidaa waxaa warbaahinta u sheegtay haweeneyda lugu magacaabo Åsa Wallentin, oo ah afhayeenka booliska magaaladda Stockholm.
Dadkii banaanbaxayey oo saxaafadda la hadlay ayaa waxaa ka mid ah gabadha lugu magacaabo Fatima ayaa sheegtey in koox cunsuriyiin ah ay goobta yimaadeen iyagoo ku qeeyliyey dadkii banaanbaxayey ka dibna ku tuuray dhalooyin lugu shubay waxyaabaha qarxa. Ma jirto cid loo qabtay falka lugula kacay dhalaanka keli socodka ah, hase ahaatee booliska waxaa ay sheegeen in dhowr iyo tobban qof oo ay aqoonsadeen qeyb ka ahaayeen weerarkii loo geeystay dadkaasi dibad baxayaasha ah.
Ugu dambeyntiina dhalaanka keli socodka ah ee baanbaxa sameeynayey ayaa intooda badan waxaa ay ahaayeen kuwo u dhashay dalka Afgaanistaan waxaana ay dalbanayeen in laanta socdaalka joojiso dadka ay u musaafuriso Afgaanistaan.